July 6, 2019 - Update New
ငယ်ငယ်က သံယောဇဉ်ကို အခြေခံပြီး၊ အနှစ်(၂၀)အကြာမှာ ​ရွှေလက် တွဲနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ဦး
July 6, 2019 Mg Naing 0
ငယ်ငယ်က သံယောဇဉ်ကို အခြေခံပြီး၊ အနှစ်(၂၀)အကြာမှာ ​ရွှေလက် တွဲနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ဦး ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ ငယ်ငယ်ကတည်းက အတူတူရင်းနီးလာကြတဲ့ သံယောဇဉ်တွေအပေါ်မှာ အတော်လေး အခြေခံပါတယ်။ မြင်မြင်ချင်း ချစ်ကြတယ်ဆိုတာထက်၊ ပိုပြီး ခိုင်မာတာက ငယ်ငယ်ကတည်းက အတူစား၊ အတူသွား၊ အတူကြီးခဲ့ကြသူတွေရဲ့ သံယောဇဉ်က ပိုပြီး ခမ်းနားပါတယ်။ […]
စနေတွေကို လျှော့ မတွက်ပါနဲ့ စနေတွေ အကြောင်းလေ့လာကြည့်ပါဦး
စနေတွေကို လျှော့ မတွက်ပါနဲ့ စနေတွေ အကြောင်းလေ့လာကြည့်ပါဦး စနေတွေဟာ (၁) နောက်ဆုံးမွေးနံဖြစ်ပေမယ့် အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အများတကာထက်ရှေ့ဆုံးကနေ ဦးစီးဦးဆောင် ပြုရမှ ကျေနပ်သူတွေ (၂) စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတယ်စိတ်ထဲရှိတာကို ရှိတဲ့အတိုင်း ခပ်ရှင်းရှင်းပြောတတ်ကြလို့မကြာခန ပြသနာ ဖြစ်တတ်ကြသူတွေ (၃) သူတို့ရဲ့ စိတ်ကို မျက်နှာမှာ အကဲခက်လို့မရအောင်ဟန်ဆောင်ကောင်းလွန်းသူတွေသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်း […]
ငွေတိုးယူပြီး ဆေးမကုပါနဲ့ ဆေးရုံကြီးသာရောက်အောင်လာခဲ့ပါ ကူညီပါ့မယ် ဆိုတဲ့ လူငယ်လေး
ငွေတိုးယူပြီး ဆေးမကုပါနဲ့ ဆေးရုံကြီးသာရောက်အောင်လာခဲ့ပါ ကူညီပါ့မယ် ဆိုတဲ့ လူငယ်လေး မုံရွာ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး မှာ ဆေးရုံတက်ရင်း ဆေးဖိုးအတွက် ငွေကြေးအခက်ခဲဖြစ်နေလားကျွန်တော့် ဆီကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ စီစစ်ပြီး တကယ် နွမ်းပါးလူနာဖြစ်ပါက ရေချမ်း ဆေးဆိုင်မှာ ဘေဖွင့်ပေးပြီး လူနာရေးရုံဆင်းသည်အထိ တာဝန်ယူပေးပါမယ်ခဗျာလက်ရှိ ကူညီပေးနေတဲ့ လူနာနှစ်ယောက်ကတော့ဆေးရုံဆင်းသွားကြပါပြီ။ လူနာနှစိဦးအတွက် […]
ကွာရှင်းတဲ့သတင်းထွက်ပြီးနောက် ပထမဆုံးအကြိမ် ပရိသတ်အရှေ့ကို ထွက်လာတဲ့ SONG HYE KYO.
ကွာရှင်းတဲ့သတင်းထွက်ပြီးနောက် ပထမဆုံးအကြိမ် ပရိသတ်အရှေ့ကို ထွက်လာတဲ့ SONG HYE KYO တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော်ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Song Hye Kyo ဟာ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Song Joong Ki နဲ့ ကွာရှင်းတော့မယ်ဆိုတာကို ပရိသတ်တွေအားလုံးသိထားပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၂ […]
အလှူရှင်မရှိလို့.. နေ့စဉ် ပဲပြုတ်နဲ့ စားနေရတဲ့ ပရဟိတ မိဘမဲ့​ကျောင်းလေး “အ လှု ရှင် ​မ ရှ်ိ​ တော့ လည်း ပဲပြုတ်​နဲပဲ.​နေ့စဉ်​ စိတ်​မ​ကောင်းပါဘူးသားတို့သမီးတို့​ရေ . သွားလှူခွင့်​ကြုံပါရ​စေ … မိတ်​​ဆွေတို့လည်း ပါဝင်​ ကုသိုလ်​ ယူနိုင်​ကြပါ​စေ YGW ပရဟိတမိဘမဲ့​ကျောင်း […]
ပုဂံကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်စာရင်း သွင်းလိုက်ပြီ (ရုပ်သံ)
ပုဂံကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်စာရင်း သွင်းလိုက်ပြီ အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံမြို့တော် ဘာကူမြို့မှာ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ကနေ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပနေတဲ့ ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကော်မတီရဲ့ ၄၃ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုမြို့ဖြစ်တဲ့ ပုဂံမြို့ကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းသွင်းလိုက်ပါပြီ။ UNESCO World […]
ကတိတခုရဲ့တန်ဖိုး အရမ်းအေးတဲ့ ညတစ်ညမှာဘုရင်ကြီးသည် မိမိရဲ့ နန်းတော်ကို ပြန်လာခဲ့စဉ် အဝတ်ပါးပါးလေးဝတ်ပြီး မတ်တတ်ရပ်နေတဲ့အဖိုအိုကင်းသမားကိုတွေ့လေသည်။ ထိုအခါ ဘုရင်ကြီးသည် အဖိုးအိုနားကပ်၍မေးလေသည်။ အဘ အအေးဒဏ်မခံရဘူးလား ?မအေးဘူးလား ? အဖိုးအိုပြန်ဖြေလေသည်။ ဘုရင်ကြီး အရမ်းအေးပေမဲ့လဲ ဝတ်စရာအနွေးထည် ကျွန်ုပ်မှာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်အဖို့အအေးဒဏ်ကို ခံနေယုံမှ အပ တခြားလွတ်မြောက်စရာနည်းလမ်းမရှိပါ။ […]
YBS ၂ စီးပြိုင်မောင်းရာကနေ ၃ နှစ်နဲ့ ၆ လ အရွယ် ကလေးကိုတိုက်မိ၊ ကလေးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ် ဇူလိုင်(၁) ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီလောက်က အင်းစိန် ပေါက်တောဝအနီး ညောင်ပင်မှတ်တိုင်နား မှာ YBS နှစ်စီးပြိုင်မောင်း ရာကနေ […]
မသန်စွမ်းတွေရဲ့ ဘဝကခက်ခဲကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ Got Talent ပြိုင်ပွဲဝင် ကိုစန်းဝင်းအောင်
မသန်စွမ်းတွေရဲ့ ဘဝကခက်ခဲကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ Got Talent ပြိုင်ပွဲဝင် တစ်ဦး ကိုဝင်းစန်းအောင်ဟာဆိုရင် မကြာသေးမီက Myanmar Got Talent မှာ အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တော်တော်များများသတိထားမိသွားခဲ့ပြီး အားပေးသူအများအပြားရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဝင်းစန်းအောင်ဟာ မသန်စွမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မသန်ပေမယ့်စွမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့အမှန်တကယ်ကိုက်ညီတဲ့လူလို့ပြောရလောက်အောင်ပဲ အားကစားဘက်မှာ ရွှေတံဆိပ် (၁၈)ဆုတိတိဆွတ်ခူးထားနိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သီချင်းဆိုတဲ့ဘက်မှာလည်း ထူးချွန်သူတစ်ဦးပါ။ […]
ပုဂံကို ကမ္ဘာ့ အမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ မအေးသောင်း
ပုဂံကို ကမ္ဘာ့ အမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ မအေးသောင်း မြန်မာတို့ရဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပုဂံ ကို ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်း အမွေ အနှစ်တစ်ခု ဖြစ်လာစေဖို့အတွက် တာဝန်ရှိသူများနဲ့ အတူ မအေးသောင်းက အ ခုဆိုရင် ယူနက်စကို ကို ရောက်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဇာဘိုင်ဂျန်မှာ […]